Duulimaadyada Wareega, Fadlan caawi
Duulimaadyada Wareega, Fadlan caawi sano 3 4 bilood ka hor #249
Hello! Waxaan xiiseynayaa shirkadaha diyaaradaha wata. Waxaan hore u ogaa wax ku saabsan iyaga sidaa darteed waa halkan waxaan weli doonayaa in aan ogaado. Sidaa darteed waxaan rabaa inaan ogaado barnaamijyada aad leedahay iyo ka dib markaad ogaato waxyaabo kale oo muhiim ah oo aan ogaan karo. Laakiin waxaan u maleynayaa in dhamaanba. Oh! iyo haddii aad haysato qaar ka mid ah talooyinka tikidhada tiknoolajiyadeed ay soo dhaweynayaan!
Duulimaadyada Wareega, Fadlan caawi sano 3 4 bilood ka hor #250
First of dhan, hello iyo soo dhawow Forum.
Bilowga, waxaad u baahan tahay qalabka duulaya duullimaadka. Way yaryihiin, xulashaduna waxay kuxirantahay PC-ga aad haysatid, si ka sii saxsan Microsoft Simulators Flight Simulators 2004 iyo FSX,X-Plane iyo P3D. Dhammaantood waa kuwo lacag bixinaya, marka waa inaad ka fekertaa qaybtaas sidoo kale. Waxaa jira hal duulimaad bilaash ah oo sim ah, laakiin taasi waa mid aad u xun, marka aniga xitaa dhib iguma noqon inaan sharraxo.
Ka dib markaan ku xiran yahay duulimaadka, waxaad u baahan doontaa diyaaradaha qaarkood. Midka ugu dambeeya, waa macmiilka ACARS. Taas sidoo kale waxay ku kala duwan tahay mid ka mid ah VA-ga kale. Qaarkood waxay leeyihiin macaamiishooda caadiga ah. Kuwa aan sameynin, badanaaba waxay isticmaalaan macaamiishii aad u da 'weynaa ee aan macquul ahayn
Waxaas ka sokow, waad u baahan kartaa qaar add-ons si loo wanaajiyo qaybo ka mid ah duullimaadyadaaga sim, laakiin sida aan sheegay, taasi waa suurtagal uun.
Duulimaadyada Wareega, Fadlan caawi sano 3 4 bilood ka hor #251
Anigu shaqsi ahaan waan soo jeedin lahaa FSX, inkasta oo waqtigan la joogo .... waxaad kuheli doontaa Steam sida ugu fiican ee aqoontayda MS ma sii taageeri doonto nooca Disk Version. Waxaan noqon doonaa doqon .... Qiimaha Steam Edition waa JOOJI CUDUR! Waxaan ka bixiyay $ 60 FSX: Daabacaadda Dahabka (Deluxe + Dardargelinta) Add-on), oo aad aad uyar ayaad bixinaysaa sidaas. HALKA hoos udhaca ma ahan in DHAMMAAN payware uu shaqeyn doono, laakiin aqoontayda taasi waa liis gaagaaban.
Anigu waxaan ahay Milkiilaha / Agaasimaha American Airways VA iyo inta aad ku soo dhaweyneyso inaad iibsato diyaaradaha diyaarka ah ee aad rabto, uma baahnid inaad iibsato diyaaradaha si aad uga mid noqoto VA. HADDII aad leedahay / rabto waa freeware, waan ku qaboojiyay taas. Sidee baan u arkaa ... noloshu waxay noqon kartaa B * TCH dhamaystiran oo dhameystiran, sidaa daraadeed maxaan uga sii badin karnaa? lol
Waxaan ahay nin cadaalad dhab ah gadaal u taagan. Waxaan iskudayaa intii karaankeyga ah ee aan la shaqeyna duuliyaasheyda, waxaanan siiyaa abaalmarino gaar ah kuwa howlgab ah (oo udhaxeeya gunnooyinka 'lacageed' ilaa helitaanka diyaarad kaliya). Xaqiiqdii waxaan ku saleysannahay goobta Ingiriisiga (sida degmada lol), oo waxaan isticmaalnaa barnaamijkooda duulimaadka duulimaadka (taas oo ah mid aad u fudud in la isticmaalo btw). Waxaa intaa dheer, waan ku siin karaa dhammaan diyaaraddaha bilaashka ah ee aan isticmaalno (in kasta oo qaar ka mid ah ay yihiin halkan lol)
Inkastoo aan inta badan sameeynayo xamuulka dheeriga ah, tanina waa sababta ay VA ugu badantahay $, waxaan u oggolaanayaa duuliyayaashaydu inay go'aansadaan waxa ay doonayaan inay sameeyaan.